Thailandy: Voasivana Tao Amin’ny Tambajotra Ny Youtube, Ary Naverina An-tserasera Indray Avy Eo · Global Voices teny Malagasy
Thailandy: Voasivana Tao Amin'ny Tambajotra Ny Youtube, Ary Naverina An-tserasera Indray Avy Eo
Voadika ny 14 Aogositra 2017 9:23 GMT
Navily tany amin’ny vohikalan’ny fitondram-panjakana ireo mpitsidika ny vohikala fizarana lahatsary, YouTube, tamin'ny Zoma (9 Martsa 2007) ka hatramin’ny Sabotsy (10 Martsa 2007) atoandro lasa teo.
Namoaka lahatsoratra mikasika io sivana io i 2Bangkok:
Navily tany amin’ny pejin’ny MICT ny mpampiasa Youtube izay te hiditra amin'ity farany avy any Thailandy. Ny MICT no masoivohom-panjakana miandraikitra ny fanivanana ny Aterineto any Thailandy. Tsy avoaka ampahibemaso ireo antony sy ireo fepetra mba hanivanana ny vohikala iray. Araka ny efa hitantsika tany aloha, rehefa miteraka resabe loatra ny sivana, dia averina an-tserasera indray ilay vohikala voasakana, ary mandà ny fanakanany azy ny fitondram-panjakana”.
Fanafohezana ny Minisiteran'ny Fifandraisana sy ny Teknôlôjia ny MICT.
Manome ny fiheverany ny mety ho antony nahatonga ilay sivana i Jromerz ao aminà sehatra fifanakalozankevitra iray [En]:
“Mikaroka ao amin'ny Youtube aho amin'izao fotoana izao (rehefa niditra tao nefa tsy nanoratra ireo litera telo ireo akory tao amin'ny adiresy IP) ary mbola misy ny sakana ao anatin'ilay vohikala. Raha miditra ao amin’ny mombamombanà mpikambana iray ianao, dia mbola alefany any amin’ny pejin’ny MICT ihany, ary tsy azo jerena (ny ankamaroany?) amin'ireo lahatsary. Tsy maintsy ho ireo lahatsary tafatafa tao amin'ny CNN ireo izao no nahatonga izany.”
Ilay lahatsary avy amin'ny CNN momba ny fanadihadiana ny Praiminisitra teo aloha, Thaksin, no resahan’i Jromerz. Nesorin’ny tafika Thai i Thaksin ka tsy dia ankasitrahan’ny fitondrana miaramila amin'izao fotoana izao ny mahita azy miseho amin'ny haino amanjery.
Misy resaka hafa momba ny fanakanana ilay vohikala ao amin'ny sehatra fifanakalozankevitry ny 2bangkok [En].
Tsy mbola nanao fanambarana mombanà sivana an-tsitrapo ny governemanta Thai hatramin’izao.
Efa malaza ho mpanakana vohikala tsy nisy fampitandremana mialoha ny manampahefana Thai.
Nanoratra i PersonalThailand [En] fa:
“Nanakana ilay vohikala koa i Tiorkia omaly saingy nanome ny antony nanaovany izany ny governemanta Tiorka. Thailandy kosa fantatra fa manakana vohikala tsy amin’ny antony mazava ary tsy misy fampitandremana.”
Azo nidirana indray ny YouTube tamin’ny mitataovovonan'ny sabotsy (10 Martsa 2007).
6 ora izayAostralia